गीतकार डा. डीआरलाई मधुर मिलनको याद आयो (भिडियोसहित) – Hotpati Media
गीतकार डा. डीआरलाई मधुर मिलनको याद आयो (भिडियोसहित)
१९ असार २०७६, बिहीबार १०:३६ मा प्रकाशित (1 वर्ष अघि) अनुमानित पढ्ने समय : १ मिनेट
काठमाडौं : डा. डीआर उपाध्यायको नयाँ गीत ‘हाम्रो मधुर मिलनको याद आयो….’ सार्वजनिक भएको छ । लोकप्रिय गायक सत्यराज आचार्यको स्वर, सागर अधिकारी ‘सरद’को सङ्गीत, शाहस साक्यको एरेञ्ज रहेको आधुनिक गीत हाम्रो मधुर मिलनको याद आयो….’को भिडियो सार्वजनिक भएको हो ।
अञ्जिता कंडेलले निर्देशन गरेको गीतको भिडियोमा प्रविन बराल र स्मृति ओली फिचर्ड छन् । विनय तामाङले छायाँकन गरेको भिडियोमा माधव वेल्वासको सम्पादन रहेको छ ।